အသိဥာဏ်ရှိတဲ့အချစ် | PoemsCorner
အရေးတကြီးလိုအပ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုလိုတော့ထင်ပါတယ်။ိမိဘနဲ့သားသမီးချစ်တာလဲအချစ်ပါဘဲ။ဒီအချစ်မေတ္တာကတော့အေးချမ်းပါတယ်။
အများပြောသလို 528 ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးပေါ့။ 1500လိုအချစ်မျိုးကတော့ပူလောင်မှုတွေပါနေပါတယ်။ချစ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော
့ပူလောင်မှုမဖြစ်အောင်ငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးနဲ့ ချစ်နိုင်မှာပါ။ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ချစ်နိုင်ဖို့ အသိဥာဏ်ရှိတဲ့အချစ်မျိုးလိုအပ်မှာပါ။အသိဥာဏ်ရှိတဲ့အချစ်မျိုးဆိုတာကတော့ တရားအသိလေးတွေသိနေဖို့ ပါ။ဥပမာ။ ချစ်သူနှစ်ယောက်တွေ့မယ်ဆိုပါတော့ ။အများအားဖြင့် တော့ ပန်းခြံလိုနေရာမျိုးမှာတွေ့ ကြတာပိုများမှာပါ။အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနှစ်ယောက်သားဘုရားသွားကြမယ်။ပန်းလှူမယ်၊ရေကပ်မယ်
ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်နေတော့ နှစ်ယောက်သားစိတ်လဲကြည်နေမယ်။ရန်ဖြစ်ဖို့ ၊စိတ်ကောက်ဖို
့တောင်မေ့ နေကြမှာပါ။ဒါကကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးတွေပြန်ခံစားရတာပါ။ဒါကတော့ ဥပမာတစ်ခုပါ။ဒီလိုဘဲတယောက်နဲ့ တယောက်တွေ့ ကြမယ်၊စကားတွေပြောကြတဲ့ အခါတရားလေးနဲ့ ယှဉ်ပြီးပြောကြမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေထက်ပိုပြီးချစ်နိုင်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အချစ်တခုကိုမလွှဲမသွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြမှာပါ။
In: ဆောင်းပါး Posted By: phyuphyu Date: Dec 29, 2010
မြင်သာ ထင်သာ မရှိတဲ့အချစ် (၂) (မိုးထက်အောင်)
မြင်သာ ထင်သာ မရှိတဲ့အချစ်
Leave comment9Comments & 562 views
By: အသဲကွဲမိုး at Dec 29, 2010
By: phyuphyu at Dec 29, 2010
ကျွန်တော်လည်း အားပေးသွားတယ်နော် အစ်မဖြူ ကောင်းပါတယ်ဗျာ ………. အမြဲအားပေးနေမယ်
nyi ma lay … 😀
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြိးပြောချင်ပါတယ်။ဆက်မရေးတတ်တော့ လို့ ပါ။
By: နေ့သစ် at Aug 14, 2011
By: ei lay at Aug 14, 2011
အပြည့်အဝကိုထောက်ခံတယ် …. ဟိဟိ
By: chityellusoelay at Aug 14, 2011
By: ei lay at Jan 3, 2012